Indlela yokuzinakekela wena
Ukuzinakekela kanjani? Kubonakala sengathi lo mbuzo uwubuwula. Owesifazane angazi kanjani izinto ezinjalo ezilula? Eqinisweni, akusiyo njalo isikhathi nesifiso sokuziqaphela wena, othandekayo wakho. Abesifazane abaningi balungele ukuhamba ngokuhamba kwesikhathi uhambo oluya esitolo se-barber, bethola izizathu eziningi. Futhi ku-cosmetician kanye ne-master of manicure ukusindisa - futhi nhlobo ibhizinisi elihle. Kungani? Uma ungathenga ijacket yasebusika noma umyeni ngale mali ngezicathulo zakho. Umphumela wokunganaki kwakho nokubonakala kwakho kungase kube ukuthi ukucabangela esibukweni kuzokuvimbela ngokuphelele into engakujabulisayo kodwa ngisho nokwanelisa.
Ukuzinakekela kanjani? Wonke owesifazane kufanele azi impendulo yalo mbuzo. Emva kwakho konke, uma amafomu elahlekile, futhi ebusweni kwakukhona imidwebo kuphela yobuhle bokuqala, bese kuthi ukucindezeleka kuseduze. Akukaze kube sekwephuzile kakhulu ukufuna futhi ufunde ukuzizinakekela. Udinga nje ukunqoba ubuvila futhi uthole ukukhuthaza. Mhlawumbe ufuna ukubheka okuhle umyeni wakho, isisebenzi esisha emsebenzini, noma mhlawumbe ngokwakho, ukuqiniseka nokuhle. Kodwa ungafunda kanjani ukuzizinakekela?
Konke kufanele kwenziwe ngesinyathelo ngesinyathelo. Okokuqala, yenza umuthi womzimba. Manje izipikili, ngisho nezindleko eziningi, zingafakwa ngendlela efanele. Vele udinga ukuthola inkosi enhle, udwebe amahora ambalwa ngesikhathi sakho somsebenzi futhi usebenzise imali ethile (kholwa mina, akuyona into enhle kakhulu). Futhi uma ungakakulungeli ukuqapha isimo sezipikili zakho nsuku zonke, zama ukuzandisa. Kulokhu, konke okudingekayo kuwe ukuvakashela inkosi kanye ngenyanga ukulungiswa, futhi akukho mafayela e-nails, ama-varnishes nezinye.
Thola ikhanda lakho ngokuhlelekile. Khumbula, kufanele abonwe ngezinwele ngesikhathi esisodwa njalo ezinyangeni ezimbili, noma ngaphezulu. Vumela inkosi ikuthathe izinwele ezisha, umbala wezinwele zakho. Ngikholelwa, ungashintsha ngaphezu kokuqaphela.
Uma ungazi ukuthi ungayinakekela kanjani, kufanele nje unake isikhumba sakho. Wonke umuntu wesifazane ekwakheka kufanele abe nokuhlanzwa kwe-tonic, i- moisturizing and nourishing cream ebusweni, izandla, izimbungulu ezimbalwa nokuphikisa. Konke lokhu akumelwe nje kuthengwe, kodwa futhi kusetshenziswe njalo.
Uma ufuna ukuqonda ukuthi ungazinakekela kanjani, ke uqaphele futhi ugqoke ikhabethe. Mhlawumbe yisikhathi sokuyibuyekeza. Khumbula mayelana nezinto ezincane - isikhwama, amaglavu, izibuko zelanga nezinye izesekeli kufanele kube uma zingabizi, okungenani zifanele.
Kumele unakekele izinyawo zakho. Ngokuvamile, abesifazane banakekelwa kuphela ubuso nezandla, bekhohlwa ngendawo enenkinga enjalo. Phela, isikhumba emilenzeni siba seqanda, sakha ama-tufts kanye nemifantu. Uma ungenayo imali ye-pedicure yezobuchwepheshe, okungenani ugeza okujwayelekile nokusikhipha ekhaya.
Kumele uzikhandle futhi uzithande. Okungenani kanye ngesonto, ujabulele ukugeza okushisayo, wenze imaski ngezinwele nobuso.
Ngaphezu kwalokho, impendulo yombuzo wokuthi ungayinakekela kanjani intombazane, isho ukuthi uzothola isikhathi sokuphumula. Akukhona kuphela kukhompyutha, ipuleti noma i-TV, futhi esimweni, emoyeni.
Uma ufuna ukuzinakekela, khona-ke ngaphandle kokubuyekezwa kokudla akukwazi ukukwenza. Awucabangi ukuthi ngokunamathela embusweni ofana nowekho okwamanje empilweni yakho, uzohlala uhlelekile futhi uhambisane no-40? Ubuhle budinga ngempela umhlatshelo, futhi lukhulu. Hlela njalo ukulayisha izinsuku. Vumela ukudla kwakho kufaka imifino, izithelo, imikhiqizo yobisi, inhlanzi, inyama enomzimba, ama- herbal teas. Kodwa kulokho okudingekile ukwenqaba inzuzo yalesi sibalo, kuvela kumaswidi, isinkwa, utshwala, ikhofi. Awudingi ukulamba. Kungcono nje ukulula ukudla ukudla kwe-caloric kokudla okubili - kwasemini nakudla.
Nika isikhathi esengeziwe sokuzilibazisa okujabulisayo kanye nokuchitha isikhathi okungavamile. Hamba ezikhangayo, vakashela i-rink ye-ice, ipaki yamanzi nokunye.
Ukuzinakekela kanjani? Kulula kakhulu, uma uthanda ngempela, ufuna ukuhlale ubheka umxhwele futhi usemusha, uma ushiya ubuvila bakho futhi ulungele ukunikeza le nqubo ingxenye ethile yesikhathi sakho siqu.
Ubuso obuphakamisa ukhilimu: ukuqina nokuzimela
North-West Management Institute (Petersburg)
Zelenograd, TC "Iridium": ikheli, izitolo, cinema